တစ်နှစ်အတွင်းမည်မျှစာအုပ်ဖတ်နိုင်မည်နည်း eReaders အားလုံး
Villamandos | | စာအုပ်များ
စာဖတ်ခြင်းသည်များစွာသောလူတို့အတွက်ဖျော်ဖြေမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပို၍ စမတ်ကျသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပုံသဏ္keepာန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေရန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများလွန်းခြင်းမရှိဘဲခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိရှိတိုးတက်စေရန်နှင့်စာအုပ်များစွာမှကမ်းလှမ်းသောပုံပြင်များကိုပျော်မွေ့ရန်ကူညီသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်နေ့တာတွင်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အချိန်သိပ်မရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ကိုပေးသောမေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာပြီးမည်သည့်စာအုပ်မျှကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်မဟုတ်ပါ။ စအို သင်္ချာဘာသာရပ်သည်စာအုပ် ၂၀၀ ကျော်ထက်မနည်းပါ.
သင်္ချာပညာရှင် Charles Chu ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် ရိုးရှင်းသောသင်္ချာစစ်ဆင်ရေးများကြောင့်သူပြသခဲ့သည် မည်သူမဆိုတစ်နှစ်လျှင်စာအုပ် ၂၀၀ အထိဖတ်နိုင်သည်ဤဝါသနာကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်ပေးရန်ဆင်ခြေမရှိသောဆင်ခြေသည်အသုံးမ ၀ င်သို့မဟုတ်လုံးဝနီးပါးမျှမရှိ။
1 တစ်နှစ်ကိုစာအုပ် ၂၀၀ လောက်ဖတ်နိုင်အောင်ကိန်းဂဏန်းတွေ
3 စပိန်တွေကတစ်နှစ်ကိုစာအုပ် ၂၀၀ လောက်ဖတ်လို့ရနိုင်မလား။
တစ်နှစ်ကိုစာအုပ် ၂၀၀ လောက်ဖတ်နိုင်အောင်ကိန်းဂဏန်းတွေ
အရင်ကြည့်ရအောင် တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ် ၂၀၀ အထိဖတ်နိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်အသုံးပြုခဲ့သောစာရင်းအင်းများ;
အမေရိကန် (သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး) သည်တစ်မိနစ်လျှင်စကားလုံး ၂၀၀ နှင့် ၄၀၀ ကြားဖတ်နိုင်သည်
စာအုပ်အများစုတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စာလုံးရေ ၅၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်စကားလုံးများစွာနှင့်များပြားလှသောစာအုပ်များရှိသည်ဟုပြောစရာမလိုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းတွက်ချက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
စာအုပ်ပေါင်း 200 x 50.000 စကားလုံးများ / စာအုပ် x 10 သန်းစကားလုံးများကို
စကားလုံး ၁၀ သန်း - စကားလုံး ၄၀၀ / မိနစ် = ၂၅၀၀၀ မိနစ်
25.0000 မိနစ်: 60 =417 horas
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတစ်နှစ်လျှင် ၄၁၇ နာရီစာထိုင်ပြီးပျော်မွေ့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုချိန် ၁,၆၄၂ နာရီသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များတွင်နာရီပေါင်း ၆၀၈ ကြည့်ရှုနေကြောင်းသတိရပါ။
စပိန်တွေကတစ်နှစ်ကိုစာအုပ် ၂၀၀ လောက်ဖတ်လို့ရနိုင်မလား။
ဒီလေ့လာမှုကမြောက်အမေရိကကလူတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးအချက်အလက်အားလုံးကိုဘယ်သူ့ကိုမှထပ်တိုးလို့မရဘူး၊ စပိန်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ထို့အပြင် ၁၀ ယောက်လျှင် ၃ ယောက်သာပုံမှန်စာဖတ်မည်ဟုဆိုကြသည်ကိုပိုမိုစဉ်းစားခြင်းက လူများစွာသည်စာအုပ် ၂၀၀ ကိုဖတ်ရန်တောင်းဆိုရန်တစ်နှစ်စာစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုပင်မဖတ်တတ်ကြပါ။
မည်သူမဆိုတစ်နှစ်လျှင်စာအုပ် ၂၀၀ ခန့်ဖတ်နိုင်သည်။ သူတို့အဆိုပြုထားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ စာအုပ်တစ်ခုစီကိုနှစ်ရက်အောက်တွင်သာဖတ်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးအခြားဝါသနာများရှိပါကမတွေးဝံ့စရာဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကသူတို့တင်ပြတဲ့မေးခွန်းကိုသူတို့ဖြေချင်တဲ့အဖြေကိုရကြတာပါ၊စပိန်အတွက်သာမကမည်သည့်နိုင်ငံမှမဆိုပါ။
ငါအများစုသည်တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ် ၂၀၀ ဖတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ပေးချင်သောအချိန်အားလုံးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေပါသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသောနေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များသည်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီထက်မကသောအချိန်ထက်စာဖတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်အားမွေ့လျော်စေပါ။ ငါဖတ်တဲ့အခါမှာငါကဖြည်းဖြည်းဖတ်တတ်တယ်၊ အသေးဆုံးအသေးစိတ်ကိုတောင်နားလည်ပြီးစကားလုံးတိုင်းကိုနှစ်သက်တယ်။ တစ်ခါတလေကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုယ်တိုင်မှတ်စုရေးတာဒါမှမဟုတ်မှတ်စုရေးတာတောင်တစ်နှစ်မှာစာအုပ် ၂၀၀ ဖတ်တာကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အရာပဲ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါကတစ်နေ့လျှင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီးတစ်နှစ်လျှင်စာအုပ်ပေါင်း ၃၆၅ စောင်ကိုဖတ်ရှုနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုမွေ့လျော်ခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်မှာသင်သည်စာအုပ်များစွာကိုဖတ်ရန်ပန်းတိုင်မထားဘဲပျော်ရွှင်မှုအတွက်စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်း၏လှပမှုမှသင်ကိုယ်တိုင်သီးခြားစီထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တစ်နှစ်လျှင်စာအုပ် ၂၀၀ လောက်ဖတ်နိုင်ပြီးပျော်မွေ့နိုင်သည်ဟုထင်ပါသလား။။ ဤ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုရမ်၌ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေပြောပြပါ။ တစ်နှစ်အတွင်းမင်းစာအုပ်တွေဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတာငါတို့ကိုလည်းပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » စာအုပ်များ » တစ်နှစ်အတွင်းမည်မျှစာအုပ်ဖတ်နိုင်မည်နည်း
10 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဆက်လက်, 417 နာရီ: 200 စာအုပ် = စာအုပ်နှုန်း2နာရီနှင့်5မိနစ်။ ပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးလာတယ် - စာအုပ်တခုစီအတွက် ၂ နာရီပဲရတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်အဲဒီအစာမဖတ်တတ်ဘူး
Gianfranca Camussi ဟုသူကပြောသည်
၂ နာရီအတွင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်သင်္ချာဆိုင်ရာအမှားအချို့ရှိပုံရသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, သင်ကိုယ်တိုင်စာဖတ်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုများကိုသတ်မှတ်သည့်ဘလော့ဂ်များကိုရှာဖွေပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ် ၅၀ ကိုအဆိုပြုခဲ့ပြီး ၅၂ နှစ်သို့ရောက်သော်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာမှာဝတ္ထုများစွာ၊ အထူးသဖြင့်သမိုင်းဝင်စာအုပ်များသည်စာမျက်နှာ ၇၀၀ မှ ၈၀၀ အောက်တွင်မကျပေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း e-reader ဖတ်ရှုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်နှုန်းသည်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကမတွေးဝံ့စရာအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်ကိုစာဖတ်ခွင့်ပြုသည်။
Gianfranca Camussi အားပြန်ပြောပါ
တစ်နှစ်လျှင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနိမ့်ဆုံးစာအုပ်များကိုဖတ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ဟာစာအုပ် ၄၀ ဖတ်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရပြီး၊ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုစီကိုတိကျတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီရမယ် (အရောင်အသွေးစုံလင်သူတစ် ဦး ရေးသားတဲ့စာအုပ်၊ ခရီးသွားခြင်းပါဝင်တဲ့စာအုပ်၊ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပါ။ ဒါဟာအလွန်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့ဖတ်မှအမျိုးမျိုးအများကြီးပေးသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်နေရာရာမှာအမှားတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ငါထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂၀၀ ၂၀၀ ထက် ၃၀ နီးပါးနီးကပ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။ "ပုံမှန်" ထက်နည်းသော "ပုံမှန်" စာအုပ်သည်တစ်မျက်နှာလျှင်စာလုံးရေ ၃၀၀ ခန့်ရှိသည်။ စာလုံးရေ ၅၀၀၀၀ တွင်စာမျက်နှာ ၁၅၀ ကျော်သာရှိသောစာအုပ်များအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်သောစာအုပ်များသည်များသောအားဖြင့်စာမျက်နှာ ၃၀၀ ကျော်သည်။ နောက်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာတစ်မိနစ်လျှင်စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်စွမ်းရည်သည်တစ်မိနစ်လျှင်စကားလုံး ၂၀၀ ထက်မကသော၊ ဤအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူ၊ သာမန် ၀ တ္ထုတွင်စကားလုံး ၁၀၀၀၀၀ (စာမျက်နှာ ၃၃၀) ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်နှုန်း 30 ppm နှုန်းဖြင့်သွားလျှင်၎င်းသည်ဖတ်ရန်မိနစ် ၅၀၀ ခန့်ကြာလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်လျှင်နာရီ ၈ နာရီခွဲ စာအုပ် ... ငါကဒီကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တစ်နေ့လျှင် ၃ နာရီ ၄/၄ စာဖတ်ရန်ရည်မှန်းထားပါက (ကျွန်ုပ်တွင်အချိန်ပိုမရှိပါ) တနင်္လာနေ့မှတနင်္ဂနွေကိုဖတ်ပါကစာအုပ်တစ်အုပ်လျှင် ၁၁ ရက်ကြာမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်နှစ်မှာစာအုပ် ၃၃ အုပ်ဖတ်တယ်။ အတော်လေးဝေး 200 စာအုပ်တွေကနေ။
Dell Parsons ဟုသူကပြောသည်
ဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြင်ဆင်နေရင်းဒီစာမျက်နှာကိုငါရောက်လာပြီ။ စာဖတ်ခြင်းကိုစာလုံးရေများ၊ စာမျက်နှာများ၊ နာရီများပေါ်အခြေခံပြီးဂဏန်းသင်္ချာမေးခွန်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဖမ်းစားမိသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်စာဖတ်ခြင်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နာရီသို့မဟုတ်မည်သည့်ကိန်းဂဏန်းကိုမဆိုပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ပိုမိုကုန်လွန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်စာအုပ်များပိုမိုဖတ်ရှုတော့မည်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဆယ်ခုထက်ပိုပြီးရှိပါသလား ၁၀၀ ။ ကောင်းမွန်သောဖတ်မှုတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုကိုမလွှဲမရှောင်ဖြစ်စေသည်; ကျွန်ုပ်တို့အားအမှတ်အသားပြုသည့်အလုပ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စာရေးသူတစ် ဦး တည်းမှမဟုတ်ဘဲသမိုင်းဝင်ကာလတစ်ခုတည်းမှ ပို၍ ရှာဖွေလိုသည်သို့မဟုတ်စာရေးသူ၏ရည်ညွှန်းချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအခြားဆက်စပ်ခေါင်းစဉ်များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာအရည်အသွေးမဟုတ်ဘဲအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ !
Dell Parsons အားပြန်ပြောပါ
ငါဘယ်လောက်ဖတ်ဖူးတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှာငါလာမယ်
ကျွန်ုပ်၏ Goodreads စာရင်းပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်ဖတ်သောစာအုပ်များရှိပျမ်းမျှစာမျက်နှာအရေအတွက်မှာ ၃၅၀ ဖြစ်သည် (အနည်းငယ်မျှသာဆိုပါစို့၊ သို့သော်အောက်သို့လှည့်ပါ) ။ ငါဖတ်ပြီးသည့်အတိုင်းစာမျက်နှာ ၃၅၀ သည်စာလုံးပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။
တစ်မိနစ်ကိုစာမျက်နှာ ၄၀၀ လောက်မဖတ်ပါဘူး၊ ၂၅၀ (ဝိုင်းပြီး) နဲ့ပိုနီးလာတယ်၊ ဒါဆို ၂၅၀ ထည့်ရအောင်။
စာအုပ်ပေါင်း 200 x 100.000 စကားလုံးများ / စာအုပ် x 20 သန်းစကားလုံးများကို
မိနစ် ၈၀,၀၀၀: ၆၀ = ၁,၃၃၃ နာရီ
ငါဖတ်ရန်တစ်နှစ်လျှင် 1333 နာရီဘယ်မှာရသနည်း ငါတစ်နေ့လျှင် ၃ နာရီခွဲခွဲစာဖတ်ရလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နာရီကျော်မျှအချိန်ယူရသည်။
၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီနှင့်သူတို့ရရှိသောလွတ်လပ်သောအချိန်၊ အားလပ်ရက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ၂ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ် ၀ င်္ကပါတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြီးပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်တွင်ဟယ်ရီပေါ်တာစာဂါတစ်ခုလုံးကို ၅ ရက်အတွင်း၊ တစ်နေ့ပုံမှန်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ တစ်ပတ်က ၃ ပတ်လောက်၊
Iris က ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာများနှင့်ရရှိနိုင်သောအချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ တစ်ပတ်ကိုစာအုပ်နှစ်အုပ်ဖတ်နိုင်တယ်။ စာမျက်နှာ ၅၀၀ ကျော်ပါတဲ့ဒီ Silo တွေကကြာကြာမခံခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကတခြားသူတွေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖတ်ခဲ့တယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ဤကဲ့သို့သောစာအုပ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်မယူပါ။ ထို့ကြောင့်အိမ်နှင့်ဘတ်စ်ကားအတွက်စာမျက်နှာများနည်းသောသူများအတွက်ပန်းခြံတစ်ခုတွင်ဖတ်ရန်၊ တစ်နေရာသို့သွားရန်ပိုမိုရှည်လျားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကျွန်ုပ်ရနိုင်သည်။
စာအုပ်အမြောက်အများကိုဖတ်ခြင်း၊ သူတို့အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ သင်နှစ်သက်ခြင်း၊ သူတို့ထံမှသင်ကြားခြင်းစသည်တို့မဟုတ်ပါ။
ချစ်သူများနေ့တွင်ပျော်မွေ့ရန်စုံလင်သောရင်ခုန်စရာစာအုပ် ၁၄ ခု
Amazon သည် Kindle Paperwhite ၏စျေးနှုန်းကိုကျဆင်းစေသည်